哥林多後書 3 CCBT - Korintofo II 3 NA-TWI | Biblica América Latina
哥林多後書 3 CCBT - Korintofo II 3 NA-TWI
1難道我們又是在稱讚自己嗎？難道我們像別人一樣，需要拿著推薦信去見你們，或拿著你們的推薦信去見別人嗎？ 2 你們自己就是我們的推薦信，寫在了我們心坎上，眾所周知，人人可讀。 3 顯然，你們是從基督而來的一封信，是我們工作的成果。這信不是用筆墨寫成的，乃是藉著永活上帝的靈寫成的；不是寫在石版上的，而是刻在心版上的。
4 我們靠著基督在上帝面前有這樣的確信。 5 我們並不認為自己能夠承擔什麼，我們能夠承擔全是靠上帝。 6 祂使我們能夠擔任新約的執事。這新約不是用律法條文立的，而是聖靈的工作，因為律法條文帶給人死亡，但聖靈賜給人生命。
7 這最終帶來死亡、刻在石版上的律法條文的事工尚且有榮耀，甚至使摩西的臉上發出榮光，儘管很快就消逝了，以色列人仍然無法定睛看他， 8 那麼聖靈的事工豈不更有榮耀嗎？ 9 那定人罪的事工尚且有榮耀，這使人被稱為義人的事工豈不更有榮耀嗎？ 10 其實先前的榮耀和現今的大榮耀相比，就黯然失色了。 11 那漸漸消逝的尚且有榮耀，這永遠長存的更是榮耀無比。
12 我們因為有這極大的盼望，就放膽無懼， 13 不像摩西將帕子蒙在臉上，以免以色列人看見那漸漸消逝的榮光。 14 但以色列人的心剛硬，直到今日，他們每逢讀舊約的時候，同樣的帕子還在那裡，沒有揭去。因為只有在基督裡，那帕子才能被除去。 15 時至今日，每逢他們讀摩西律法的時候，帕子仍然蒙在他們心上。 16 然而，他們一旦歸向基督，那帕子就被除去了。 17 主就是那靈，主的靈在哪裡，哪裡就有自由。 18 我們這些臉上不再蒙著帕子的人，可以像鏡子一樣反映主的榮光，漸漸變成主的樣式，榮上加榮。這都是主的作為，主就是那靈。
CCBT : 哥林多後書 3
Korintofo II 3
Mo gyidi boa asɛnka no
1Eyi kyerɛ sɛ yɛrehoahoa yɛn ho bio anaa? Nkrataa a edi adanse pa a efi yɛn nkyɛn anaasɛ ɛreba mo nkyɛn no ho hia yɛn sɛnea ebi ho hia nnipa afoforo bi no. 2 Mo ankasa moyɛ krataa a ɛwɔ yɛn nkyɛn a wɔakyerɛw wɔ yɛn koma mu sɛnea ɛbɛyɛ a obiara behu na wakan. 3 Ɛyɛ nokware sɛ Kristo no ankasa na ɔkyerɛw saa krataa yi ɛnna ɔde somaa yɛn. Ɛnyɛ kyerɛwduru na wɔde kyerɛw no ɔbo pon so na mmom Onyankopɔn a ɔte ase no Honhom na wɔde kyerɛw guu nnipa koma mu.
4 Yɛka eyi, efisɛ, yɛnam Kristo so wɔ gyidi wɔ Onyankopɔn mu. 5 Biribiara nni yɛn mu a ebetumi ama yɛasi yɛn bo aka se yebetumi ayɛ saa adwuma yi. Ahoɔden a yɛwɔ no fi Onyankopɔn. 6 Ɔno na ɛnam ne so nti yetumi som apam foforo no a ɛnyɛ mmara a wɔakyerɛw na mmom Honhom. Mmara a wɔkyerɛw no de owu brɛ yɛn nanso Honhom no ma yɛn nkwa.
Kristo anuonyam foforo
7 Bere a wɔde mmara a wɔkyerɛw no ɔbo pon so rema no, Onyankopɔn anuonyam daa adi. Ɛwom sɛ Mose anim hyerɛn a ɛhyerɛnee no dumii nanso na ano yɛ den ara kosi sɛ Israelfo no antumi anhwɛ n’anim. Na saa mmara a ɛde owu ba de saa anuonyam no na ɛnam a, 8 anuonyam bɛn na adwuma a efi Honhom mu no rennya. 9 Dwuma a wobuu nnipa fɔ wɔ mu no yɛ anuonyam de. Anuonyam bɛn na dwuma a wobuu nnipa bem wɔ mu no rennya! 10 Yebetumi aka se esiane sɛ nnɛ yi anuonyam no di mu yiye no nti, anuonyam a na edi mu mmere bi a atwam no kɔ. 11 Na sɛ na anuonyam wɔ biribi a ɛnkyɛ mu a, anuonyam bɛn na ade a ɛte hɔ daa no rennya.
12 Esiane sɛ yɛwɔ saa anidaso yi nti, yɛwɔ akokoduru. 13 Yɛnte sɛ Mose a ɔde nkatanim kataa n’anim sɛnea ɛbɛyɛ a Israelfo no renhu n’anim hyerɛn no pa a ɛrepa na ayera no. 14 Na wɔn adwene mu nnɔ, na ebesi nnɛ yi, sɛ wɔkenkan apam dedaw nhoma no a, saa nkatanim no da so kata wɔn adwene so. Ansa na nkatanim no befi hɔ no, gye sɛ onipa de ne ho ma Kristo. 15 Ebesi nnɛ, bere biara a wɔbɛkenkan Mose mmara no, nkatanim no da so kata wɔn adwene so.
16 Nanso ebetumi afi hɔ sɛnea Kyerɛwsɛm no ka se, “Mose de ne ho maa Awurade no, na ne nkatanim no fii hɔ.” 17 Kenkansɛm yi mu “Awurade” no yɛ Honhom, na baabiara a Awurade Honhom wɔ no, ahofadi wɔ hɔ. 18 Yɛn a nkatanim biara nkata yɛn anim no gyina hɔ ma Awurade anuonyam na saa anuonyam no ara bi fi Awurade a ɔyɛ Honhom no, sesa yɛn ma yɛkɔ ne tebea mu ma yɛnam so nya anuonyam a ɛkorɔn yiye.
NA-TWI : Korintofo II 3